'IZINJA ZOMQUQU,' ZIVUSA INGXAKI KWAKHONA-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
‘Izinja zomququ,’ zivusa inkathazo kwakhona
Njengabantwana abagqogqa oonomadudwane kwizithonga zokuvula i-Wild Bunch uSam Peckinpah wayeyazi indlela yokuvuselela izinto. Ngo-1971, iminyaka emibini emva kokuba iNtshona echulumancisayo negazi-gazi yamenza waba ngomnye wabalawuli abadumileyo-okanye abadumileyo-eMelika, uPeckinpah wathatha iqela labasebenzi waya emaphandleni ase-Cornish wabuya nefilimu ebizwa ngokuba yi-Straw Dogs, eyakhathaza abaphulaphuli entsha, kwaye mhlawumbi esondele ngakumbi, indlela.
Ifilimu ayinalo inani lemivo emithathu ye-Wild Bunch, kodwa ubundlobongela apha buyenzeka, ngokuphazamisayo, kwindawo epholileyo yasekhaya, phakathi kwabantu abangekho, njengoko iBunch kunye neentshaba zabo, ababulali ngomsebenzi. Ngeli xesha kukho nesondo, enye i-generator enkulu yomsindo kubaphulaphuli belo xesha lingenakulinganiswa - kunye nokwesabisa, ukutyumza isondo, ngelo xesha. I-Peckinpah's Straw Dogs ifana neStrindberg enezixhobo. Kwakuyenye yeefilimu eziphikisanayo zexesha elibonakala ngathi, ngokuphindaphindiweyo, uhlobo lobudala begolide beengxabano.
Ngoku umlawuli u-Rod Lurie uzimisele ukwenza kwakhona izinja ze-Straw, ukuvula uLwesihlanu, kwaye umbuzo kukuba ingaba eli bali lingakwazi ukukhupha ababukeli bhanyabhanya njengoko lenza kwiminyaka engama-40 eyadlulayo. U-Lurie uthembeke kakhulu kwisicwangciso sefilimu yasekuqaleni, ethembeke ngakumbi kunokuba uPeckinpah wayekwinoveli kaGordon Williams apho i-screenplay yabo yayisekelwe khona.
Zombini iifilimu, ngokwenyani, malunga nobutshaba beedolophu ezincinci kubantu bangaphandle kwaye, ngokubanzi, kuye nabani na obonakala ehlukile; kuzo zombini, intiyo yoluntu ayinakunyanyiswa, ayinakukwazi ukuthandwa okanye ukuqiqa.
Abalingisi bakaPeckinpah bangoochwephesha bemathematika ogama linguDavid (Dustin Hoffman) kunye nomfazi wakhe omncinci oshushu, uAmy (uSusan George); ULurie's ngumbhali wesikrini obonakalayo, okwabizwa ngokuba nguDavid (James Marsden) kunye nenkosikazi yakhe encinci eshushu, uAmy (Kate Bosworth). Kuzo zombini ezi nguqulelo, esi sibini sisandul’ ukufudukela kwidolophu apho uAmy akhulele khona, ukuze ahlale phakathi kwabamelwane bakhe bakudala, abantu ababefudula bemthanda kunye nabo babephoxekile ababekade bemncoma, bonke abaqalayo, bethandabuza ngokunzulu umyeni wakhe webhulukhwe entle awamphathela yona. ndibuye naye.
ULurie utshintsha useto ukusuka eCornwall ukuya kwiGulf Coast yaseMississippi kwaye wehlisa umsantsa ngeminyaka phakathi komyeni nenkosikazi. (UGeorge wayeneminyaka engama-20 ubudala ngexesha lemveliso, uHoffman phakathi kweminyaka engama-30.) Kodwa ushiya i-dynamics yasekuqaleni embi ngokuqinileyo.
UDavide usazithoba kuAmy; abantu basekuhlaleni basamjamela baze bamhleke; yaye uphinda acatshukiswe kukusilela kwakhe ukuhlangabezana nabo. Kwaye ngo-2011, njengango-1971, iingxabano ezincinci zibonakala kuthotho lwezenzo zobundlobongela ezikhulayo: ukusuka ekubulaweni kwekati ukuya ekudlwengulweni ukuya ekubulaleni ukuya ekubulaleni okungaphezulu kunye nokunye. UDavid omtsha, njengomdala, akazimelanga yena kunye nenkosikazi yakhe de kube kuphela ukhetho oluseleyo kuphalazo lwegazi.
Mhlawumbi uguquko lukaLurie olugqwesileyo kwizinja zoMqungu lukhetho lomsebenzi weqhawe lakhe. Ukwenza uDavid umgcini wesikrini umnxibelelanisa, phantse ngokuzithobayo, kumlingisi odlalwa nguMichel Piccoli kuJean-Luc Godard ka-1963 Ukudelela, omnye umgcini-skrini olahlekelwa yintlonelo yomfazi omhle, kwaye ngenxa yesizathu esifanayo: Akayi, okanye akanako '. t, mkhusele.
Njengokwendelelo, indelelo ebhekiswa ngumfazi endodeni yakhe ingumthombo wokungakhululeki, kwanentlungu emadodeni kubaphulaphuli; akukho mntu unokunyamezela ukujongwa ngolo hlobo ngumntu amthandayo. Ke ababukeli bobuchwephesha bobudoda banokuziva bekhululekile kakhulu xa umyeni obuthathaka, okhathazekileyo ekugqibeleni egqibe kwelokuba wonele kukuntlontwa kwabantu basedolophini aze abethelele kude abambalwa babathuthumbisi bakhe. Ubuncinci yena-kunye nathi sonke bafana-akusayi kuphinda kufuneke ukuba siphinde sibone ezo mbonakalo zoyikekayo nezityholayo.
Ubundlobongela bePeckinpah's Straw Dogs yayisisizathu esicacileyo sokuba ababukeli abaninzi bokuqala-'70s bakhubeke, kodwa eyona nto inamandla kolu luhlu lwemfazwe yimbono yayo ekrwada, engathandekiyo yobudlelwane phakathi kwamadoda nabafazi. Kukho imiboniso embalwa eyoyikisayo kwiimuvi kunodlwengulo luka-Amy ngowayesakuba yinkwenkwe yakhe, uCharlie (Del Henney), kwaye into eyenza ukuba yoyike kakhulu ngenkumbulo kukungaqondi okoyikekayo okuvelisa kwixhoba kunye nombukeli - nokuba sesiphi na isini. Okukhwankqisayo kukuba, uAmy, ochasa ngamandla ekuqaleni, uqalisa ukuziva ezonwaba njengoko isithandwa sakhe sakudala sisenza okubi.
Eyona nto imbi kakhulu, nangona kunjalo, kuye nawuphi na umbukeli ozijonga njengempucuko ngokufanelekileyo, kukuba uyasiqonda isizathu sokuba: Umnqweno womyeni wakhe (kunye nogonyamelo oluqhubekayo) luye lwamenza uCharlie ukuba enze isigqibo esikhohlakeleyo.
Ke omnye wamaqabane kaCharlie uthatha ithuba, kwaye imeko esele ibonakala ngathi ibuya kabuhlungu, emva koko, kwithoni yayo yokuqala eyothusayo. (Olu dlwengulo lwesibini lwafinyezwa kwifilimu yokuqala yokukhululwa kwe-American, ukuphepha ukulinganisa kwe-X.) Kodwa umonakalo kwingqiqo yabaphulaphuli ngokwabo, kwaye awusoze, kuyo yonke ifilimu, ibuyiselwe ngokupheleleyo. Nangona ugxininiso lukaPeckinpah kulandelelwano lodlwengulo lujolise ikakhulu kwindlela u-Amy asabela ngayo - ukusebenza kukaGeorge, kwezi meko zinzima, kufihlakeleyo kwaye kucace ngendlela engaqhelekanga - ukuhlelwa kwakhe okubonakalayo kusigcina simazi nomyeni wakhe ongekhoyo.
Ifilimu inqunyulwa ngamaxesha athile ibuyela kuDavid, ebonwa ehleli ngokudakumba ebaleni apho ashiywe khona nguCharlie kunye nabahlobo bakhe. Ukunqumla ngokwemvelo kugxininisa ukungasebenzi kukaDavid, ugxininiso olubonakala ngathi, ngelo xesha, kwinqanaba lamalahle ukuya eNewcastle; sibe nobungqina obuninzi. Ngaphambi kokuba umfanekiso ugqitywe, nangona kunjalo, intsingiselo yaloo manxeba ibonakala, njengayo yonke enye into kulo mboniso bhanyabhanya imtyibilizi, ukutshintsha.
Kulandelelwano lokugqibela olunobundlongondlongo nolunganyamezelekiyo, xa uDavid egxotha iqela elinxilileyo-uCharlie kunye nezinye izikhanyiso zalapha ekhaya-ezama ukungena kwikhaya lakhe, uAmy umi kufutshane engenakuzenzela nto de kube sekupheleni, ejongeka eluncedo njengoko umyeni wakhe wenzayo kuloo ntsimi ililolo. Kwaye kulo lonke ungqingo sinokubona uDavide naye eqalisa ukonwabela into ebengafanelanga ukuba ayenze: isenzo sokubulala abanye abantu.
Oku kufana kugqwethekileyo kusebenza kwi-Lurie's Straw Dogs, naye, kodwa uPeckinpah wayenobukrelekrele obukhethekileyo bokungcolisa iintloko zababukeli bakhe. Kwaye wayesebenza ngexesha elifanelekileyo ukuze loo talente ichume, kuba nangona wonke umntu wayexoxa ngayo yonke into, kwakukho izinto ezithile esasicinga ukuba siyazazi ngendalo esisiseko yamadoda nabafazi: imibuzo uninzi lwabaphulaphuli ababecinga ukuba izinzisiwe.
Kwakuyindalo kaSam Peckinpah ukuba afune ukubonisa abaphulaphuli bakhe into engafuni ukuyibona, ukuyenza ukuba bazive into eyayingacingi ukuba ivakalelwa. Xa ubukele izinja zakhe zeStraw, uphuma wazi ngakumbi ngawe. Okanye mhlawumbi ngaphantsi. Into onokuthi uyixelele ngokuqinisekileyo kukuba ibuhlungu.
Ukulinganisa: R (kubundlobongela obumandla, umxholo wesondo kunye nolwimi)
Abalingisi: James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgard kunye noJames Woods
UMlawuli: URod Lurie